Apple's Netflix wuxuu arki karaa iftiinka sanadka soo socda | Waxaan ka imid mac
Horraantii sannadkan, Apple waxay soo bandhigtay ballanqaadkii shirkadda ee nuxurkeeda. Taxanaha ugu horreeya ee isaga u gaarka ah ee uu bilaabay wuxuu ahaa The Planet Of The Apps, taas oo xaqiiqda muujinaysa dhadhan qadhaadh u reebay warbaahinta aadna ugu xun bulshada horumariyaha.
Khamaarka xiga ee Apple wuxuu ahaa Carpool Karaoke, oo ka soo baxay showgii James Corden. Isbeddelka qaabkii barnaamijkii asalka ahaa ayaa la micno ah in warbaahinta iyo kuwa raacsan indho wanaagsan kuma ay arkin, sidaa darteed taxanahan asalka ah ee Apple ee labaad ayaa sidoo kale hoos u dhacay.
Sannadka soo socda, waxaa lagu qiyaasaa in Apple qorshaynayso maalgasho wax ka badan $ 1.000 bilyan oo ku jira nuxurka asalka ah, laakiin waqtigan xaadirka ah wax aqoon ah uma lahayn taariikhda la filaayo in la bilaabo adeeggan, ma garanayno sida ay u qorshaysan tahay inay u fidiso. Maqnaanshaha xaqiijin rasmi ah, shirkadda CSS Insight waxay xaqiijineysaa in bilaabista Netflix ee Apple ay noqon doonto sanadka soo socda.
Waqtigan xaadirka ah, xaqiijinta rasmiga ah ee kaliya ee ku saabsan waxyaabaha kuu gaarka ah ee aad qorsheyneyso inaad abuurto ayaa ah Sheekooyin Cajiib ah oo dib loo dhigay, taxane uu abuuray Steven Spielberg taasina mar kale waa la sii deyn doonaa iyada oo ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee Apple. Netflix iyo HBO labaduba waxay ku sharadayeen waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyagoo leh guulo la taaban karo, taas oo u saamaxday inay helaan macaamiil tiro badan.
Laakiin Apple ma noqon doonto adeegga VOD oo keliya oo dhowaan arki doona iftiin, tan iyo Disney ayaa sidoo kale ku dhawaaqday qorshayaasheeda mustaqbalka ee la xiriira 2019 kaas oo ay ku bixin doonto dhammaan waxyaabaha ay hadda ruqsad ka siisay adeegyada kale sida Netflix. Buugga ay Disney bixin doonto wuxuu ka koobnaan doonaa filimada Marvel, Star Wars iyo sidoo kale sawirrada Pixar iyo Disney lafteeda.
Madaxa Disney, ayaa maalmo ka hor sheegay in qiimaha adeeggiisa, ugu yaraan markii hore, wuxuu ka hooseeyaa Netflix, iyada oo ay ugu wacan tahay xajmigeeda oo yar. Sida la filayo, Apple waxay dooratay siyaasad isku mid ah laakiin marka hore, waa inay ballaarisaa waxyaabaha ay ku bixin doonto VOD -keeda, maadaama taxaneheeda gaarka ah ay awood u yeelan doonto inay wax yar ama waxba ka qabato suuqa, suuq ay adduunka oo dhan ka taliyaan Netflix.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple's Netflix wuxuu arki karaa iftiinka maalinta sanadka soo socda